Kugadziriswa Kwemhando - Micvd.com
Yedu yemeshini dhizaini yakakwira tekinoroji, inoenderana neEurope, America neTaiwan tekinoroji
Wedu michina com ponents vanobva kune inozivikanwa yenyika dzese mavambo, vanoda AirTAC, panasonic, Nokia uye zvichingodaro.
1, Guarantee yemidziyo inopiwa nekambani yedu inoshandiswa itsva kushandiswa kwekugadzirisa kwekugadzirisa uye yakakodzera zvinhu zvakagadzirwa, uye mune zvose zvinosangana nehuwandu hwehutano uye hutano hwakataurwa muchibvumirano.
2, Chirongwa chekambani chinopiwa nemichina yacho mushure mokutungamira kwayo kwakakwana muhutano hwose basa 3 mazuva mushure mekugadzirisa nekugadzirisa matambudziko, kuti zvibudirire chigadzirwa chekushanda kwezviratidzo zviratidzo.
3, Kambani yedu inovimbisa muhutano hwakanaka hunotsanangurwa mubvumirano, nzira yekugadzirisa yekugovera midziyo yekugadzira kushandiswa kwekugadzirisa zvinhu kana kukanganisa kwezvinhu uye zvose zvinokonzerwa nebasa revatengesi rinokonzera kukanganisa chero kupi zvayo mukugadzirwa kwezvakaipa uye kukuvara.
4, Iyo yose mhando yemhando yechipupuriro nguva yekugadzirwa kwemwedzi ye12 mwedzi mushure mekugamuchira. Kana yakawanikwa muhutano hwehuwandu hwehutano, hutano hwezvinhu kana zvigadziro uye hazvienderani nemirairo yesungano, kana kuratidza kuti zvivako hazvina kukwana (kusanganisira zvikanganiso zvingashandiswa kana kushandiswa kwezvinhu zvisingakwanisi, zvimwewo), mutengi ane kodzero yekuenderana nesangano rekuongorora rinobudiswa nemutemo wepamutemo wezvinhu zviri mukati mehutano hwakanaka nguva iyo chirongwa chekutengesa mutengesi chinoiswa mberi.
5, Kambani inoenderana nehutano hwechigadzirwa pamagetsi emagetsi ezvo zvakapiwa zvigadzirwa uye chivimbiso chemuchengetedza purojekiti yekushandisa.
304SS chitupa chekuongorora
Chetifiketi cheEC cheA automatic bhodhoro rekuwachisa muchina
Chetifiketi cheEC yemuchina wecaps
Setifiketi yeEC yekuzadza